‘जसले हात्ती नियन्त्रण गर्छ, उसैलाई भोट’ « Loktantrapost
‘जसले हात्ती नियन्त्रण गर्छ, उसैलाई भोट’
२८ कार्तिक २०७४, मंगलवार ११:१९
जिल्लाका ५ वटा सङ्घीय र १० वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ३ वटा सङ्घीय र ७ वटा प्रादेशिक इकाई हात्ती समस्याको चपेटामा छ ।
झापा । दक्षिण झापाको एउटा गाउँमा केही दिन अघि मुख्य दलका एक उम्मेद्वार भोट माग्न गएका थिए । सयौँ गाउँले भेला भएको बेला उम्मेद्वारले गाउँको कच्ची बाटोलाई आफु जितेपछि पक्की बनाइदिने भाषण गरे । खोलामा पुल हालिदिने आश्वासन सुनाए । यस्तै यस्तै भत्ता, उपचार अनेक सुविधाका कुरा गर्दा उम्मेद्वारका समर्थकहरुले बेस्सरी ताली पिटे । तर सभाको कुनामा चिउडोमा हात राखेर सुनिरहेकी एउटी वृद्धाले चित्त बुझाइनन् । उनले ताली पनि पड्काइनन् ।
दलका कार्यकर्ताहरुले ती ‘चर्चित नेता’ भन्दै बृद्धासँग उम्मेद्वारको भेट गराइदिए । ‘आशिर्वाद चाहियो आमा, मलाई जिताउनु पर्यो !’–उम्मेद्वार वृद्धासँग झुके । त्यतिबेला मात्र वृद्धा बोलिन्–‘यहाँ हात्तीबाट ज्यान कसरी बाँच्ला भन्ने त्राही त्राही भइसक्यो, मरिगइयो भने के गर्नु त्यो बाटोले, के गर्नु त्यो भत्ताले !’
‘जसले हात्ती नियन्त्रण गर्छ, उसैलाई भोट दिने’ भन्दै वृद्धाले निकैबेर उम्मेद्वारसँग आक्रोश पोखिन् । भएको के रहेछ भने केही महिना अघि जलथलको चारकोसे जङ्गलबाट आएको हात्तीले ती वृद्धाको घर भताभुङ्ग पारिदिएको रहेछ । भागेर जसोतसो उनी र उनको परिवारका सदस्यहरुले ज्यान जोगाएका रहेछन् । उनको गाउँमा त्यही रात एक जनालाई हात्तीले मारेको रहेछ ।
हात्तीको आक्रमणबाट पिरोलिएकी ती बृद्धा एउटी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, झापाको आधा जनसङ्ख्या यो समस्याबाट प्रत्यक्ष पीडित भइरहेको छ । ‘हात्ती नियन्त्रण गर्नेलाई भोट दिन्छौँ’ भन्ने जमात लाखौँको छ । अब भन्दा फरक नपर्ला, चुनावमा जिताउने वा हराउने निर्णायक जनमत हात्ती पीडितसँग छ ।
आधा झापा हात्तीपीडित ः
झापामा ५ लाख ८५ हजार २ सय २८ मतदाता रहेका छन् । त्यसको लगभग आधा २ लाख ४४ हजार मतदाता प्रत्यक्ष रुपमा हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको लोकतन्त्र पोस्टले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
जिल्लाका ५ वटा सङ्घीय र १० वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ३ वटा सङ्घीय र ७ वटा प्रादेशिक इकाई हात्ती समस्याको चपेटामा छ । हात्तीले मान्छे मारेको र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइरहेको आधारमा यो विश्लेषण गरिएको हो ।
हात्ती समस्याबाट झापा क्षेत्र नं. १,२ र ३ पूर्ण रुपमा प्रभावित छन् भने यहाँ मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ । यी क्षेत्रका ६ वटै प्रादेशिक इकाई समस्याबाट प्रभावित छन् ।
झापा क्षेत्र नं. २ को दुई तिहाई भूगोल हात्तीको त्रासमा छ । क्षेत्र नं. ४ को आंशिक भागमा हात्तीको त्रास छ भने क्षेत्र नं. ५ चाहिँ यो समस्याबाट अहिलेसम्म मुक्त जस्तै रहेको छ ।
झापा–१ मा मेचीनगरको पुरै भाग, भद्रपुरको ९ र १० नं. वडा र बुद्धशान्तिको ४, ५, ६ र ७ नं. वडा पर्दछ ।
हात्तीपीडित भनी परिचित बाहुनडाँगी समेत हाल मेचीनगरमै पर्ने भएकाले झापाको पूर्ण प्रभावित क्षेत्र झापा–१ हो । यहाँ १ लाख ९ हजार ६ सय ७६ मतदाता बसोबास गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला बन कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०६९ साल यता हात्ती आक्रमणबाट झापा–१ मा ९ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
मृत्यु हुनेहरुमा शान्तिनगरका अशोक तामाङ, लालबहादुर राना मगर, गोपीलाल विक र धनबहादुर राई रहेका छन् भने बाहुनडाँगीका असली राई, लक्ष्मी रम्तेल सार्की र मनोहरि ढुङ्गेल छन् ।
यसैगरी, धाइजनका शुक्र कवर र मेचीनगरका डम्बर बहादुर कुँवरको पनि हात्तीको आक्रमणमा मृत्यु भइसकेको छ ।
सबैभन्दा पीडित झापा–३ ः
झापाको आधा भूगोल नै हात्ती समस्याबाट लपेटिएको अवस्थामा आम मतदाताको मुख्य सरोकार हात्ती नियन्त्रण नै हुनसक्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।
पछिल्लो अध्ययनले झापामा सबैभन्दा बढी हात्तीपीडित क्षेत्रको रुपमा झापा–३ देखिएको छ ।
बाहुनडाँगीमा विद्युतीय घेराबेरा भएपछि जङ्गली हात्ती भारतबाट आउन रोकिएका छन् । तर दक्षिण र मध्य झापाको जङ्गलमा बस्न थालेका रैथाने हात्तीले झापा–१ लाई आक्रमणको निशाना बनाउन थालेको छ ।
भद्रपुर, हल्दिबारी, बाह्रदसी र कचनकबल हात्ती समस्याको चर्को पीडा व्यहोरिरहेका छन् । यहाँ १ लाख १४ हजार ५ सय ८६ मतदाताको बसोबास रहेको छ ।यस क्षेत्रमा २०६९ यता १३ जना मानिस हात्तीबाट मारिएको जिल्ला बन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मृत्यु हुनेहरुमा पृथ्वीनगरका आशामाया राई, दुर्गाप्रसाद पाण्डे, गुनमाया बस्नेत, ज्ञान बहादुर चाम्लिङ, मङ्गलवीर तामाङ र देबीकुमार राई रहेका छन् भने भद्रपुरका बालमाया लिम्बु, शर्मिला लिम्बु र दुर्गा कटुवाल रहेका छन् ।
यसैगरी, कचनकबलका मनराज केरुङ, हल्दिबारीका रतिलाल मेचे, बनियानीका भवानीप्रसाद घिमिरे र बालुबाडीका बजारी राजबंशीको हात्तीको आक्रमणमा मृत्यु भएको हो ।
झापा–२ मा १ लाख १४ हजार ३ मतदाताको बसोबास छ । जसमध्ये दुई तिहाइ अर्थात ७५ हजार भन्दा केही बढी मतदाता हात्तीको समस्या व्यहोरिरहका छन् ।
अर्जुनधारा पुरै, बुद्धशान्तिको वडा नं. १,२,३ र कनकाईको ८ र ९ नं. वडाको भूभागमा झापा–२ पर्दछ ।
२०६९ साल यता यस क्षेत्रमा हात्तीको आक्रमणमा परी ८ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
मृत्यु हुनेहरुमा बुधवारेका माया लिम्बु, गणेशबहादुर भुसाल, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र कृष्णमाया मगर रहेका छन् भने अर्जुनधाराका रामचन्द्र बोगटी, गरामनीका जयनारायण अधिकारी, गरामनीकै दिलबहादुर मगर र खुदुनावारीका सावित्रा ओझाको पनि हात्तीकै आक्रमणमा मृत्यु भएको छ ।
झापा–४ मा २ जना (रनमाया मगर र झुमादेवी भट्टराई) र झापा–५ मा एक जना धनमाया कार्की (दमक)को हात्तीको आक्रमणमा मृत्यु भएको बन कार्यालयले जनाएको छ ।
झापा–४ र ५ को केही उत्तरी भेगमा कहिलेकाहि हात्तीले दुःख दिने गरे पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा त्यहाँ पीडा न्यून नै छ ।
चुनावी मुद्दामा ‘हात्ती नियन्त्रण’ ः
मानिसले सर्वप्रथम जीउधनको सुरक्षा नै खोज्दछ । आफ्नो सुरक्षा नै व्यक्ति वा परिवारको प्राथमिक सरोकार बन्ने हुँदा चुनावी मुद्दा पनि त्यसैले निर्धारण गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
राष्ट्रिय सरोकारका चुनावी मुद्दा अरु नै छन्, तर झापाको आधा भूगोलको स्थानीय मुख्य सरोकारको मुद्दा ‘हात्ती नियन्त्रण’ नै हो । तर राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
झापा–१ मा हात्ती नियन्त्रणको विषय २०४८ सालदेखि नै चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ र नेकपा एमालेका रविन कोइरालाले हात्ती नियन्त्रणको मुद्दालाई दह्रोसँग उठाएर मतदाता आकर्षित गरेका थिए ।
तर पछिल्लो समयमा झापा–३ मा हात्ती समस्या चर्किदै गएकाले त्यताको स्थानीय प्राथमिक चुनावी मुद्दा पनि यही बनिसकेको छ ।
झापा–२ मा यस अघिको संविधानसभाको चुनाव जितेका एमालेका प्रेम गिरीले हात्ती नियन्त्रणको विषयलाई चुनावमा खुबै उठाएका थिए ।
बाहुनडाँगीमा जस लिने होड ः
मतदाताको घनत्व बाक्लो रहेको बाहुनडाँगी क्षेत्र झापा क्षेत्र नं. १ को चुनावमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने सक्ने क्षेत्र हो ।
यहाँका २० हजार मतदाताको सोझो सरोकार हात्ती नियन्त्रणको मुद्दासँग जोडिदै आएको छ ।
विश्व बैङ्कको सहयोग र प्रकृति संरक्षण कोषको सक्रियतामा बाहुनडाँगीको तिरिङदेखि नकलबन्दासम्म मेची किनारमा सोलार फेन्सिङ गरिएपछि भारतबाट हात्ती आउने क्रम ह्वात्तै रोकिएको छ ।
अहिले बाहुनडाँगीका बासिन्दाले रातमा ढुक्कले सुत्न पाएका छन् भने जनधनको क्षति रोकिएको छ । यसरी हात्तीको समस्या समाधान भएपछि झापा–१ मा नियन्त्रणको जस लिने होडबाजी सुरु भएको छ । हात्ती नियन्त्रणको योजना होइन, अहिले कसले हात्ती रोकेको भन्ने विषयमा मुख्य दलहरु आफ्नै फाइदाको प्रचार गर्दै हिडिरहेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार रहेका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले बाहुनडाँगीको हात्ती छेक्ने विद्युतीय तारबार आफ्नो पहलमा भएको दावी गर्दै आएका छन् ।
उनले चुनावी प्रचारको गीतमा समेत ‘बाहुनडाँगीको हात्ती नियन्त्रण विश्वप्रकाशले गरेको’ भन्ने कुरा समेटेका छन् ।
तर नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका नेताहरुले चुनावी प्रचारको क्रममा एकातिर विश्वप्रकाशको दावीको खण्डन गर्दै आएका छन् भने अर्कातिर नेकपा एमालेको पहलमा विद्युतीय तारबार ल्याइएको आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
बाहुनडाँगीको एमाले नेता एवम् प्रकृति संरक्षण समाज नामक एनजीओको संस्थापक अर्जुन कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्युतीय तारबारको विषयमा लगातार वहस चलाउँदै आएका छन् ।
जसले हात्ती नियन्त्रण गरेको हो, उसलाई स्थानीयबासीले कृतज्ञतास्वरुप मत प्रदान गर्छन् भन्ने विश्वासका साथ हात्ती नियन्त्रणको जस लिने होडबाजी चलिरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
झापा–३ मा पनि हात्तीकै नारा ः
नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामनन्त्री एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला उम्मेद्वार रहेको मुलुककै चर्चित निर्वाचन क्षेत्रमा समेत राष्ट्रिय मुद्दा जत्तिकै हात्ती नियन्त्रणको स्थानीय मुद्दाले चुनावमा स्थान पाएको छ ।
पृथ्वीनगर, भद्रपुर, हल्दिबारी र कचनकबल जस्ता क्षेत्रमा लगातार हात्तीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ । तसर्थ हात्ती नियन्त्रणको कुरा नगरे भोट नपाइने बुझेरै दलहरुले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन थालेका हुन् ।
झापा–३ मा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता सिटौलालाई राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले कडा चुनौति दिइरहेका छन् ।
कचनकबल र हल्बिारी जस्ता स्थानीय गाउँपालिकामा राप्रपाले चुनाव जितेका कारण हात्ती नियन्त्रणको मुद्दामा राप्रपाको भूमिका महत्वको हुने निश्चित छ । लिङ्देनले विकास र सुरक्षाको नारा अघि सार्दै हात्ती नियन्त्रणको दीगो उपाय आफुले नै गर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
लिङ्देन जिल्ला विकास समितिको शाहीकालीन सभापति रहँदा बाहुनडाँगीमा हात्ती नियन्त्रणका लागि पहिलोपल्ट ३० लाखको बजेटमा सुरुङ बार बनाएका थिए ।
काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सिटौलाले हालै हात्ती नियन्त्रणका लागि भनेर आफ्नो पहलमा ८ करोड ८ लाखको बजेट छुट्टिएको दावी गर्दै आएका छन् ।
मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण परियोजना अन्तर्गत दक्षिण झापाको जलथलदेखि उत्तरी झापाको बाहुनडाँगीसम्म नै सोलार फेन्सिङ र करिडर निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारले हालै सो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
बजेट आइपुग्न बाँकी रहे पनि नेताहरुले भने त्यो बजेटका बारेमा प्रचार गरेर भोट तान्ने प्रयास भने थालिसकेका छन् ।
काङ्ग्रेस पक्षधरहरुले त्यो बजेटको श्रेय लिन थालेपछि राप्रपा, एमाले र माओबादीको संयुक्त मोर्चाले जोडदार खण्डन गर्दै त्यो बजेट सबैको पहलमा नेपाल सरकारले पठाएको हुँदा त्यसमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुका आस्था र विचारमा फरक भए पनि उनीहरुका केही साझा मुद्दा पनि छन् । झापामा साझा बनेको एउटा सशक्त मुद्दा ‘हात्ती नियन्त्रण’ पनि हो । जसले उम्मेद्वारहरुको भविष्य र चुनावको नतिजा निर्धारणमा सोझो भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।